Mpanamboatra volo volo olombelona | Fayuan
Mpanamboatra wigs ny olombelona tsara indrindra ho an'ny fayuan
Volo volo olombelona olombelona
Ny volon-dehilahy Breziliana
Volo volon'olombelona Indiana
Volo volon'olombelona Malezianina
Ireo mpanamboatra volon'olombelona
Manana vokatra avo lenta isika izay mahatonga antsika ho iray amin'ny orinasam-bolo olona tsara indrindra, malaza ny vokatra eto amin'izao tontolo izao avy any Brezila, India, Vetnam hatramin'ny Frace, Africa mankany Etazonia ary orinasa iray tsara indrindra any Chine.
Wave voajanahary tsara indrindra
Roa milanja, manjaitra 100 grama isaky ny tratra
Volo tsara volo tsara fanahy virtoaly
lanja 400 Gram, Sampana baiko hanaiky, fotoana fandefasana 2-3 andro momba ny asa
Mahitsy ny volon'olona
Izahay manokana dia ny volo any Breziliana, ny volo Peroviana, ny volo Maleziana, ny volo Indiana, ny volon-doha ary ny fanakatonana volo.
Mannequin volo lava volo dia Lace Frontal Wig
Haavo volo 12A, lokon'ny volon-koditra volo, halavan'ny volo 12-30 santimetatra. Ny loham-bolo volo mirefy 100% dia malefaka, maharitra sy mendrika fividianana, izay mety ho an'ny vao manomboka sy ny mpanao volo. Miaraka amin'ny volo 7A, 8A, 9A ary 10A (Drobby indroa) azo alaina. Fonosam-bolo ny loko voajanahary rehetra (raha tsy misy ny fanodinana miloko), loko maizina, loko miloko, lokon'ny Ombre. Lavon'ny volo 8 "~ 30". Weight 100G = 3.5OZ Per Bundle na namboarina. Sampana baiko nomena, MOQ dia 1 Pack (100G). Fotoam-pandefasana ao anatin'ny 24 ora raha any stock, 5 ~ 7 Andro raha efa Namboarina. Fotoana fandefasana amin'ny ankapobeny, 3-5 andro fiasana. Mandoa vola Paypal, Western Union, T / T, Escrow, Money Gram, sns. Fihenam-bidy azo amidy. Refund & fifanakalozana azo.
Kapohy ny tamponny boribory volo mba hahatonga ny fakany volo tsara sy hiketahana ho fanarenana aorian'izany. manjaitra ny tamponny volon-koditra atao ho volo weft.sew fangaron-damba sy fanidy na tombo-kase ho lasa wig. sasao ny volo, esory ny menaka volo sy ny vovoka, manadio volo maloto, ataovy malefaka sy malama ny volo. mamolavola ny volo arakaraka takiana, ary amboarina ny modely hanamboarana taovolony. Mampiasa ny feedex OR DHL izahay amin'ny fandefasana ary ao anatin'ny telo na fito andro dia hahazo ny baikonao eo am-baravarana ianao.
Ny fandefasana fanohanana, ny MOQ dia singa iray.
Kapoaka rehefa nahazo ny fandoavana manontolo.
Ny anarany, ny adiresy sy ny laharan'ny findaona dia azo ampiasaina amin'ny fampahafantarana ny fandefasana.
Afaka manonta ny marika famantarana tsotra ary mametaka amin'ny fonosana.
Raiso ny fenitra momba ny habetsaky ny habetsaky ny isam-bolana na vidiny, hahazoana fihenam-bidy na fandefasana maimaim-poana amin'ny baiko vitsivitsy.
Afaka hanome fanomezana ny mpanjifanao kely kely (3D mink eyelash).
Wig Real Real an'ny volo mainty
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona dia niditra tsikelikely ny fiainan'ny olona ny fanaovana wigs ary tonga tsikelikely ho an'ny fashionistas. Fayuan Hair, marika marika marika no manome volo mainty volo amin'ny volo mainty. Ny bibilava dia azo ampiharina, mety amin'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy. Ny olona rehetra tia ny hatsarana dia mety. Ny volo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny sarin'ny olona manontolo. Ny fomba volo dia mijery tsara amin'ny zavatra rehetra. Mazava ho azy fa zava-dehibe tokoa ny fomba volo izay mety aminao. Ny volon-doko marina amin'ny volon-doko mainty noforonin'i Fayuan Hair dia ny volo mainty izay misy tena izy. Mahatsiaro ho malefaka sy malefaka amin'ny fikasihana, madio sy tsara tarehy ny volo, avo ny simulation, afaka mamiakotra sy hohosorina amin'ny sitrapo ihany koa, ary tena mety izy io hikarakarana azy.
Rambo Fototra miaraka amin'ny volom-borona fatratra noho ny volo lavitra
Fayuan volo dia mpanamboatra volo wofonon'olombelona matihanina. The wigly farafara miaraka amin'ny bang curly namboarina avy amin'i Fayuan Hair dia tsy nanova ny sary fotsiny no nahatonga izany, fa koa nitondra fahatsorana sy mety kokoa ho an'ny fiainantsika. Satria ho an'ny vehivavy tia hatsarana, tena faran'izay tena ilaina ny volon-dehilahy. Azonao atao ny mahazo ny taovolony tianao raha tsy manapaka ny volonao na mandany fotoana be. Amin'ny maha wigly lehibe ny volony, ny vehivavy sasany manana volo fohy indraindray dia maniry ny hanova ny taovolony, ny wigs lehibe curly dia safidy tsara. Ankehitriny, ny volo wig miaraka amin'ny volon-doha volom-borona dia lasa fitaovana fampidirana akanjo, mitafy azy io dia afaka maneho ny hatsaran'ny maha-olona azy. Safidio ny volon-doha volon-doha amin'i Fayuan sy volon-doha mirehitra mba hanampiana ny fomba tsy mahazatra sy tsara ho an'ny tenanao.
Wigs fohy mavesatra ho an'ny volo volo
Ny volon-tsiram-borona fohy dia somary mamy volo, izay manome indrindra fahatsapana milamina sy madio ny olona. Raha te-hanao tsara tarehy sy tsara tarehy ny volonao fohy, andramo fohy volo fohy volom-borona. Ny volon'ireo tovovavy ao volo dia lavitra dia manana loko tsara tarehy ary voajanahary mba hitafy, manome fahatsapana mamelombelona sy mahavita. Ankoatr'izay, misy fiantraikany tanteraka ny vokatr'ity wigs fohy wavy ity, ary tsy misy fihenjanana amin'ny wigs. Fayuan Hair dia efa nirotsaka tao amin'ny indostrian'ny fanamboarana volo volo ho an'ny olombelona nandritra ny 21 taona ary manana traikefa be amin'ny fampivoarana sy fanaovana fikarohana wig. Manome toky ny kalitaon'ny wig tsirairay, ity fehikibo fohy volo ity dia tsy anisany. Fidio ny Fayuan Hair, ataovy ny volon-koditra volon'olombelona, ​​toa io fantsom-bolo fohy fohy io dia tena mampino sy voajanahary, mba hahafahanao mitafy azy tsy misy ahiahy.
Wigs mainty hoditra amin'ny volo lavitra
Tena malaza amin'ny vehivavy ny volom-borona mainty hoditra. Ny ankamaroan'ny vehivavy dia manao volom-borona lava mainty lava volo mba ho tsara tarehy kokoa sy tanora kokoa. Ny volonolona volon'orona lava volo lava Fayuan dia antsoina hoe volom-borona somary tsy manara-penitra, ary ny vokatr'izany dia maivana, maivana ary mahazo aina. Tsy manam-paharoana ny hatsarana miavaka an'ity wigs mainty hoditra lava ity. Ataovy izany ary avelao hanova avy hatrany ianao ho vazaha lava volo mahafinaritra. Vehivavy maro no mahatsapa fa rehefa avy manao ilay volom-borona fitraky volo amin'ny volo fiba, dia mamy sy milentika kokoa izy io, ary nihatsara ny toetran'ny ankapobeny. Afaka mahazo izany koa ianao.
Izahay dia orinasam-bolo Human Long izay monina any Guangzhou any Chine nanomboka 11 taona lasa ary manamboatra famokarana voajanahary Human Hair sy vokatra vita amin'ny volon'olombelona virtoaly toy ny Human Hair Extensions ary Weft Machine ary Fanenona tanana, fanidiana, lakandrano, fanitarana, ary Ny volon-dantelina feno volo dia mirona amin'ny volom-borona
Manana vokatra tsara kalitao izahay izay mahatonga anay ho iray amin'ny orinasa hairan'ny olombelona tsara indrindra eran'izao tontolo izao avy any Brezila, india, vetnam mankany France, Africa to USA ary orinasa iray tsara indrindra isika any Chine.
Ny antony manosika anay dia ny hahatonga ny mpanjifanay ho tsara indrindra amin'ity orinasam-pifandraisana ity ka izay no mahatonga anay mikarakara ny kalitao sy ny fanodinana ataontsika, koa ho azonao antoka fa rehefa manao asa aman-draharaha amin'ny orinasanao izahay dia mahazo tsara ny volo sy olona tsara indrindra 100%, izay no orinasa anay malaza ho an'ny.
Izahay no manome antoka ny vokatra ataontsika AZONY fa ny fiainana ny volo dia raha mbola mitandrina